प्रिया दा उर्स, पोर्तुगल | यात्रा समाचार
प्रिया दा उर्स, पोर्तुगलमा
पोर्चुगल मा गर्मी गन्तव्य को सबैभन्दा लोकप्रिय गर्मी गन्तव्यहरु per se, Sintra हो। लिस्बन जिल्ला मा अटलान्टिक महासागर मा तटवर्ती संग यो आकर्षक पुर्तगाली गाउँ छ कि मध्य 90 को दशक देखि छ विश्व सम्पदा.
यो ठ्याक्कै अटलान्टिक तट हो जुन केहि ठाँउहरूमा रबड चट्टानहरूले सजाएको छ। यी चट्टानहरूको बीचमा, लुकेको, पोर्तुगालमा सबैभन्दा उत्तम समुद्र तट हो: प्रिया दा उर्स। हामीले यसलाई काबो दा रोका नजिक फेला पार्यौं र किनकि यो लुकेको छ र यसमा पुग्न सजिलो छैन, यो एक मध्येको रूपमा लोकप्रिय भएको छ पोर्चुगल मा नग्न समुद्री तट। के तपाईं घाममा हिँड्न र नुहाउने सूट बिना स्नान गर्ने आँट गर्नुहुन्छ?
प्राप्त गर्न प्रिया दा उर्स तपाईं चट्टानको एक छेउमा पुग्ने एक एकदम ठाडो मार्ग तल जान हिम्मत गर्नुपर्दछ। समुद्रीतट र पानीमा दायाँ, तर यो फिसलन छ त्यसैले तपाईंसँग निश्चित पकड भएको जुत्ता लगाउनुपर्दछ, अन्यथा तपाईं स्लाइडको रूपमा तल जानुहुनेछ। यो एक संगठित समुद्र तट होईन, यसको स्थानको कारण, त्यसैले तपाईले खानेकुरा र पेय पदार्थको झोला बोक्नु पर्छ। र सूर्यबाट तपाईंलाई कभर गर्नको लागि केही।
के यो प्राप्त गर्न सम्भव छ? Sintra मा समुद्र तट? हो, डु by्गाबाट। यो विकल्प धेरैले छनौट गर्दछन्। यो भ्रमण गर्न लायकको छ किनकि यो एक सुन्दर समुद्र तट हो नरम र न्यानो बालुवाको साथ, सुन्दर प्राकृतिक। यो पनि एक सानो झरना छ। मैले माथि भनें, यसको स्थान को लागी एक गन्तव्य छ पोर्चुगल मा नग्नता, तर यो आधिकारिक रूपमा न्यूडिस्ट समुद्र तट होइन त्यसैले तपाईं नुहाउने सूटमा जान सक्नुहुन्छ वा तपाईं जान सक्नुहुन्छ र कोही पनि ना naked्गो छैन।
केहि चट्टानहरू, धेरै सुनौलो बालुवा, कुनै रेस्टुरेन्ट वा कियोस्कहरू छैन, डेक्चेयरहरू वा छाताहरू छैनन्, लाइफगार्डहरू छैनन्। सुन्दर पनि छ प्रिया दा उर्स, लिस्बनबाट करीव kilometers१ किलोमिटर अवस्थित।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » प्रिया दा उर्स, पोर्तुगलमा
एलिस टापु र यसको प्रसिद्ध प्रतिमा हेर्नुहोस्